Tirada Duulimaadyada gudaha Nigeria oo la dhimay - BBC Somali
Image caption Arik Air waa mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ugu wayn galbeedka Afrika
Shikadda ugu wayn shirkadaha diyaaradaha ee dalka Nigeria ayaa hoos u dhigtay kala bar duulimaadyadii gudaha dalkaasi iyadoo uu dalkaasi ka jirto shidaal yari.
Arik Air waxaa sidoo kale saameyn ku yeesahay shaqo-joojin ay ku dhaqaaqeen shaqaalaheeda oo ka cabanayay in aan bilooyin badan la siinin mushaaraadkooda.
Duullimaadyada la joojiyey ayaa mushaakil ku noqonaya kumanaan reer Nigeria ah oo doonaya inay dalkooda u dhoofaan xilliga fasaxa Masiixiga.
Hadal qoraal ah ayaa shirkadda Arik Air waxay ku sheegtay in shidaalka ay helayso uu yahay kala bar shidaalkii dayaaradaheedu u baahnaayeen si ay u shaqeeyaan.
Xilligan haddaba shidaal yarida ay haysato shirkadda ayaa maamule ku xigeenka shirkaddu wuxuu BBC u sheegay inay ku khasbanaadeen inay kala yareeyaan duullimaadyadooda.
Laakin shirkado kale ayaa iyagu hawshooda wata, hanaanka ganacsiga ee shirkadda Arik-na waxaa uu ahaa mid sannadihii dhawaa la dhaliilayey.
Shirkadaha duullimaadyada ee Nigeria ayaa xaalad qasan ku jiray, iyadoo adeegyada loo sameeyo dadka safrayana ay ahaayeen kuwo liita, waxaana wax caadi ah noqday dib u dhaca duullimaadyada iyo joojintooda. Laakin shidaal yarida iminka jirta ayaa uga sii dartay lacagta adag ee dalku u baahan yahay si uu ugu iibsado shidaalka dayaaradaha oo iyadana yaraatay.
Inkastoo ay Nayjeeriya shidaal soo saarto, haddana dibadda ayay ka keensataa dhamaanba shidaalka dayaaradaha ay isticmaalaan , maadama warshadaha shidaalka sifeeya ee dalka aysan ahayn kuwo si buuxda u shaqeeya.